FBC - Qorattoonni dhaqna keenya keessa qaamni (organ) haaraa jiraachuusaa bira geenyeerra jechaa jiru
FBC Kamisa Ebila 11 2010 E.C. - Thursday, April 19 2018 G.C.
Manni marichaa muudama muummee ministiraa Dr. Abiy dhiyeessaniif 16 raggaasise
Manni marichaa wixinee labsii gurmaa'inaa fi aangoo qaamolee raawwachiistuu irratti mari’achuun raggaasise
Godina Jimmaa Aanaa Sokorruutti balaa tiraafikaa qaqqabeen lubbuu namootaa darbe
Namootni kaleessa magaala Mooyyaaleetti balaa qaqqabsiisan too’atamaa jiru
Oomishtummaa buna Harar dabaluuf hojjetamaa jira
Qorattoonni dhaqna keenya keessa qaamni (organ) haaraa jiraachuusaa bira geenyeerra jechaa jiru
Finfinnee, Mudde 27, 2009 (FBC) Qaamni (organ) hanga ammaatti bira hin-ga’amne dhaqna keenya keessa jiraachuusaa bira ga’uusaanii qorattoonni himan.
Qaamni haaraa kun moggaasi ‘Masantarii’ jedhu kan kennameef yoo ta’u, qaama dhokataa marummaan xiqqoo marummaan guddaa waliin wal-quunamsiisudha jedhameera.
Masantariin kana dura qaama (organ) mataa isaa danda’e ta’uunsaa hin-mirkanoofne ture.
Qorannoon dhiheenya kana Naanseet Gaastiro’introlojii fi Hepotolojii irratti ba’e garuu Masatiriin qaama dhaqna keenyaa mataa isaa danda’e (organ) ta’uusaa mirkaneesseera.
Qorataa Hospitaala Yuunivarsitii Ayarlaand Limariik Kaalviin Koofiydha yeroo jalqabaatiif masatiriin qaama dhaqna keenyaa (organ ) ta’uusaa kan ifoomsan.
Qaamni kun kan addaan ciccitaa fi wal-xaxaa osoo hin-taane caasaa ofiisaa danda’e tokko kan qabudha jedhaniiru Koofay.
Qorataan kunii fi isaan waliin kan hojjatan 2012 jalqabee qorannoo Maayikrooskoppiin deggarame gadi fagoo erga taasisanii booda caasaa mataa isaa kan qabuu fi qaama dhaqna keenyaa keessaa tokko ta’uusaa bira geenyeerra jedhaniiru.
Haata’u malee garuu qaamni kun hojiisaa akkamitti akka hojjatu qorattoonni kunniin hin-ibsine.
Argannoo haaraa kanaan wal-qabtees Koofay fi kanneen isaan waliin hojjatan fakkii anaatoomii haaraa qopheessaa jiru.
Gara-fuulduraattis hojiiwwan ijoo qaama kanaa qorachuun xiyyeeffannoon kan itti-kennamu ta’a jedhameera.
Kutaan qaamaa Masantarii jedhamu kun argamuun wal-qabtee kitaaba barnootaa Gireey Anaatoomii dabalatee kitaaboleen barsiisaa wal’aansa fayyaa gara-garaa kutaa qaamaa isa haaraa itti dabalaa jiru jedhameera.
Masantarii baay’ina kutaa qaamaa dhaqna keenyaa 79 guddiseera; hagam fayyaaf murteessoodha kan jedhaman Onnee, Sammuu, Tiruu, Somba fi Kalee ta’anis, kanneen hafan 74n fayyaatti akka jiraannuuf gahee mataa isaanii gumaachu. .
Oduuwwan Biroo « Gurra keenya akkamitti qulqulleessuu qabna?	Qoricha kamuu fudhachuun dura…. »
Walaayittaa Diichan fi Q/ giyoorgis waancaa Konfedereeshinii Afrikaan ala ta’an